Mareykanka oo 24-sano kadib safiir u magacaabey Soomaaliya | Puntlandnow.com
Mareykanka oo 24-sano kadib safiir u magacaabey Soomaaliya
24-sano kadib Dowladda Mareykanka ayaa Soomaaliya u soo magacaawday Safiir cusub, kaasi oo noqon doona Safiirka Dowladda Mareykanka u fadhin doona dalka Soomaaliya.
Sanidihii ugu dambeeyay Mareykanka waxaa Soomaaliya uga howlgalaayay ergay oo ma laheyn safiir rasmi ah oo Mareykanka u qaabilsanaa arimaha Soomaaliya.
Madaxweynaha Mareykanka Brack Obama, ayaa tallaadadii magacaabay Safiirka cusub ee Mareykanka ee Soomaaliya, waxaana loo magacaabay Haweenay lagu magacaabo Katherine Simonds Dhanani oo xilal kala duwan kasoo qabatay Afrika.
Dhanani oo hadda ah Agaasimaha Arrimaha Ammaanka iyo Gobolka ee Xafiiska Africa ee Waaxda Arrimaha Dibadda ayaa horey uga soo shaqeysay dalallka India, Mexico iyo Guyana.
“Magacaabistan taariikhiga ah waxa ay tuseysaa xiriirka sii qota dheeraanaya ee Somalia iyo Mareykanka” Ayay tiri Jen Psaki oo ah Afhayeenka Waaxda Arrimaha Dibadda Mareykanka.
Safiirka cusub ee Dowladda Mareykanka ayaa waxaa fadhi u noqon doona Magaalada Nairobi ee dalka Kenya, inta ay ka hagaageyso xaalada ammaan ee dalka Soomaaliya, sidoo kalena Muqdisho laga furaayo Safaaradii Mareykanka uu ku lahaa Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya ayeey fursad u tahay magacaabista Safiirka cusub ee Dowladda Mareykanka u soo magacaawday dalka Soomaaliya, maadaama iminka xiriirka USA iyo Soomaaliya intii la magacabay Raysil wasare Cumar Cabdirashiid Cali Sharamarke uu noqonaayo mid wanaagsan.